Isisombululo sezixhobo zamandla zeUPS
ngomphathi ku 17-11-17
I-UPS (Inkqubo yaMandla engenakuphazanyiswa) ngumbane ongenakuphazanyiswa odibanisa ibhetri (ihlala ibhetri ekhokelayo engena-asidi) kwikhompyuter yomgcini kwaye iguqula amandla e-DC abe ngumbane wombane ngokusebenzisa iisekethe zemodyuli ezinje nge-inverter yomamkeli. Oku ikakhulu esetyenziselwa ...
Isisombululo esikhawulezayo sokutshaja itraki yeforklift
ngomphathi ku 17-11-14
Ngokuqhubela phambili kwetekhnoloji, zonke iintlobo zezixhobo zombane ukuphucula kakhulu ukusebenza kobomi bemihla ngemihla, kwaye ezi zixhobo zombane zinxulumene nentlawulo, zikhatshwa kukuqhutywa kukhuseleko ngokuhambelanayo, kwaye ziyakuqonda ukuba iplagi yokudibanisa ekhawulezayo yenziwe. ANEN Izihlanganisi eziPhezulu zaNgoku ...
Isisombululo seLed Connector
Ngophuhliso loluntu kunye nokuqhubeka kwezinto ezintsha zesayensi kunye netekhnoloji, izihlanganisi zezibane ze-ANEN ziyavela njengoko amaxesha efuna njalo. Olu luhlu lwezibane kunye nezihlanganisi zinokungena ngokukhawuleza, kulula ukuyifaka, ukhuseleko kunye nokugcina amandla, kukhulisa ukusebenza ngokukuko ...
Isisombululo esitsha soMbane seZithuthi
Ngokwanda kwamandla ezithuthi amatsha, ulwakhiwo lokutshaja imfumba luyakhawulezisa kwaye ibango lesinxibelelanisi likhula ngokukhawuleza. Ukuphendula kuphuhliso olukhawulezileyo lwezithuthi ezitsha zamandla kwixa elizayo, ANEN isixhobo sokudibanisa imoto esitsha sinempawu ...
Isisombululo seNkqubo yaMandla elanga
Uphawu: Ukuveliswa kwamandla elanga, ngenxa yempawu yokhuseleko lolondolozo lwamandla okusingqongileyo kunye notyalo-mali lwexesha elinye, isibonelelo sexesha elide, ngoku, iyanda kuwo onke amazwe aphuhlileyo ngokukhawuleza, azalelwe "iPlag-and-play" isinxibelelanisi selanga, ANEN ilanga ...
Isisombululo se-OT Terminal Solutions
Iitheminali zeBrass, ezikwabizwa ngokuba ziingcingo, ucingo lobhedu, impumlo yobhedu, iibhloko zesiphelo, njl.njl. ukuphela kocingo lobhedu ...
Isixhobo sokuXhobisa abaMandla abaNgxamisekileyo Isisombululo esiDibanisa ngokukhawuleza
ngomphathi ku 17-11-13
Amandla ombane yeyona nto ibalulekileyo / esisiseko kwimveliso yamandla kuphuhliso lwezoqoqosho kuzwelonke, ngophuhliso lwamaxesha, ukusetyenziswa kwezixhobo ezinamandla zombane ngokuya; Iziganeko ezahlukeneyo zifuna imeko yongxamiseko ...